ကြင်နာစွာထွေးဖက်ထားမယ် တစ်နာရီ ဒေါ်လာ ၆၀
လူတွေဟာ ယုယကြင်နာစွာထွေးပွေ့ ကာ ဖက်ပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာမှုကိုပြသ၊ လိုချင်ကြပါတယ်...
နယူယောက်မြို့ ရဲ့ ရိုချက်စတာအရပ်မှ ဂျက်ကလင်းဆမ်မြူရယ်ကတော့ ဒီအချက်ကို အသုံးချ
ပြီး ဆန်းဆန်းပြားပြားအချစ်မပါတဲ့ ရိုးရိုးသားထွေးပွေ့ ယုယပိုက်ထွေးနိုင်မယ့် အခွင့် ပေးတဲ့၁ နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၆၀ ကုန်ချမည့် အခပေးထွေးပွေ့ ဖက်ထားနိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု
တည်ထောင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဘ၀မှာ အထီးကျန်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်သောကရောက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ထွေး
ဖက်ထားချင်စိတ်ကတော့ သင့် မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ မှာမလွဲပါဘူး... ဒါပေမယ့် ခက်တာက သင့် မှာ
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရမည့် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမရှိတာပါပဲ...
အခုတော့ အဲဒီအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ့် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ဂျက်ကီဆယ်မြူယယ် အ
လွန်ခဲ့ တဲ့ လကပဲ သူမဟာလုံးဝမသိကျွမ်းတဲ့ လူတွေကို သူမအား ထွေးပွေ့ ယုယစွာ ဖက်ထား
နိုင်မယ့် အခွင့် အရေးအတွက် ၁ နာရီ ဒေါ်လာ ၆၀ သာကုန်ကျမည့်တစ်မူထူးခြားတဲ့ လုပ်ငန်း
တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
" ကျွန်မကလည်း ပိုက်ထွေးယုယစွာ ဖက်ထားတာကိုနှစ်သက်သဘောကျပါတယ်... ဒါကြောင့် အ
ခုလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာ ကောင်းမယ်လို့ တွက်ဆမိပါတယ်... လူတော်တော်များများက
တော့ ဒီစိတ်ကူးကုို သဘောမကျကြပါဘူး... ဒါကြောင့် ကျွန်မကတော့ ခပ်လျှိူလျှိူလေး ပဲအသေး
စားလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အပိုဝင်ငွေလေးရအောင်လုပ်လိုက်တာပါ..." လို့ စွန့် ဦးတီထွင် လုပ်
ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ခပ်ဆန်းဆန်းစိတ်ကူးနဲ့ စခဲ့ တဲ့ လုပ်ငန်းကလေးဟာ အခုတော့ တိုင်းသိပြည်
ကျော် ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး သူမဟာလည်း FOX, CNN စတဲ့ ကမ္ဘာကျော်သတင်းမီဒီယာကြီးတွေမှာ တွေ့ 
ဆုံမေးမြန်းခံရ၊ ဖေါ်ပြခံခဲ့ ရပြီးဖြစ်သလို နာမည်ကျော်ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျင်မီဖယ်
လွန် နှင့် ညနက်ပိုင်းတွေ့ ဆုံးမေးမြန်းခန်းမှာလည်း ပါဝင်တင်ဆက်ဖို့ ရှိနေပါသေးတယ်...
သင့် သီလကိုသင်ယုံကြည်လျှင် လာခဲ့ ပါ... သင့် စိတ်တွေ နူးညံ့ လာစေရပါ့ မယ်...
ဂျက်ကီဟာ ဒီအခပေးကာ ဖက်ထားမယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို အထက်တန်းကျောင်း
သူဘ၀မှာပင်စတင် စဉ်းစားမိခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူမနဲ့ ညီမ ဖြစ်သူတို့ ဟာ လမ်းပေါ်မှာပဲ တစ်ခါဖက်
၁ ဒေါ်လာနဲ့ အပွေ့ အဖက်ခံခဲ့ ကြပြီး တစ်နေ့ လျှင် ဒေါ်လာ ၈၀ လောက်စီ ၀င်ငွေရရှိခဲ့ ကြပါ
သူမဟာ တစ်ကယ့် ပွေ့ ဖက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လက်မှတ် မရခဲ့ ပေမယ့်ရိုချက်စတာ
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ ပြီး လိင်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုများမပါဝင်သည့် ယုယပိုက်ထွေးပွေ့ ဖက်ရေး
စွယ်စုံကျမ်းပါ ဖက်နည်း ၁၀၀ အကြောင်းကို သေချာကျန လေ့ လာခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
သူမထံလာရောက်အားပေးကြတဲ့ ပွေ့ ဖက်သူများဟာ ဖဲမွေ့ ယာထက်လဲလျောင်းကာ နှစ်ကိုယ်
ယှဉ်တွဲလို့ ထွေးပွေ့ ထားတဲ့ ( ဇွန်းနှစ်ချောင်းနီးကပ်စွာချထားသလို ) ပုံစံဖြင့် လုပ်ငန်းသဘော
တစ်ခါတစ်ရံတော့ လည်း ရိုးရိုးလေးပဲချစ်ပါရစေ၊ ဖက်ပါရစေဆိုတဲ့ ဆရာသမားများက နောက်
ထပ်တစ်ဆင့် ထပ်တက်ကာ ချစ်ခရီးကြမ်းလျှောက်လှမ်းဖို့ တောင်းဆိုတတ်ကြပေမယ့် အများစု
ကတော့ သူမရဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ စည်းကိုမကျော်ပဲ လေးစားလိုက်နာကြပါတယ်လို့ ဆယ်မြူရယ်
စွန့် ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်...
Photo: 9WSYR video caption
သူမရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နားလည်မှုမလွဲအောင်လို့ ဂျက်ကလင်းက
တော့ လုပ်ငန်းမစခင်မှာပဲ အရေးကြီးအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို အမေးအဖြေပုံစံ
မေး ။ ထွေးပွေ့ ဖက်ထားခြင်းမစမှီ အရင်တွေ့ ဆုံကြပါသလား...( တစ်ခါတည်းတန်းပြီးဖက်ကြ
ဖြေ ။ ဟုတ်ကဲ့ ...မဖက်ကြခင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မစိမ်းအောင်၊ သက်တောင့် သက်
သာဖြစ်အောင်၊ ရင်းနှီးသွားအောင် ခဏတစ်ဖြုတ်အရင်တွေ့ ကြပါတယ်....
မေး ။ ပွေ့ ဖက်နေကြယင်း စိတ်တွေကြွလာပြီး မထိမ်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဖြစ်လာကြယင် ရော....
ဖြေ ။ အဲဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ ရှင်... ဒါမျိူးကဖြစ်တတ်ပါတယ်... အဲဒီလိုအစက၇ိုးရိုးနောက်
တော့ တစ်မျိူးတိုးလို့ ချစ်ချင်တာမျိူးခွင့် မပြုပေမယ့် ဒီလိုစိတ်တွေထကြွလာတာကြောင့် 
လည်းကျွန်မကို အားနာစရာမလိုပါဘူး... စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး...
မေး ။ အဲဒီလိုထွးဖက်ထားတာမျိူးပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း အ၀တ်အစားတွေဝတ်ထားရပါသလား..
ဖြေ ။ ဟုတ်ပါတယ်.... အ၀တ်အစားတွေချွတ်ထားခွင့် လုံးဝမရှိပါဘူး...
အဆိုပါ ကြင်နာစွာထွေးဖက်ထားမယ် အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖေါ်ပြချက်အရ လူသားချင်း ထိ
တွေ့ ပွေ့ ဖက်ခြင်းဖြင့် စိတ်သောကဝေဒနာများ ဖြေဖျောက်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တာကြောင့် ဂျက်
ကလင်းဟာ ဒီ အကြင်နာပေးမယ်ဖက်ထားကွယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ တာပါလို့ 
ဒီ ယုယနွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင် နေရာလေးဟာ နေ့ စဉ်အပြိုင်အဆိုင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှား နေရတဲ့ ခက်
ခဲပင်ပန်းလှတဲ့ ဘ၀ ကနေ ခွန်အားတွေဖန်တီးပေးမယ့် နူးညံ့ သာယာတဲ့ အတွေ့ အထိကိုပေး
လိင်မှုဆိုင်ရာ၊ အချစ်ရာဂတွေမပါတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိတွေ့ မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုတွေ
ကြောင့် သိသာတဲ့ အကျိူးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားတွေရှိ
နေပေမယ့် အမေရိကန်တွေဟာ ဒီလိုအပြုအမူမျိူးမရှိကြပါဘူး...
ဒါကြောင့် ဒီနေရာလေးမှာ ဂျက်ကလင်းဟာ တစ်ဦးချင်းစီကို ကြင်နာစွာထွေးဖက်ထားခြင်းကို
သူမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုကလည်း တစ်ခါထွေးပွေ့ ဖက်ထားတဲ့ လူသားတွေရဲ့ စိတ်တွေငြိမ်သက်
အေးချမ်းလာပြီး ဒီကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုနူးညံ့ သိမ်မွေ့ တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်စေချင်တာပါပဲ...
လာရောက်ပွေ့ ဖက်သူဟာ ဂျက်ကလင်းနဲ့ တစ်ခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်းရှိနေမှာဖြစ်ပေမယ့် 
ထိုအိမ်ထဲမှာတော့ လုံခြုံရေးအရ တစ်ခြားသူတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်...
ကိုယ့် ကိုယ်ကိုစိတ်ထိမ်းနိုင်တယ်ဆိုယင်တော့ သွားကြစို့ ဆရာတို့ ရေ....
Posted by peter kyaw | at 1:57 AM |
Labels: news: metro.us
Man's firework party stunt backfires
ထူးဆန်းအံ့ ဖွယ် လမ်းသရဲ ရုပ်သေးအက...
The man with the world's stretchiest skin‎ shows o...
Varieties of Photos...
Only in Russia... ရုရှားမှာပဲ ဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို......
Who's more deflated? This sex doll or the 18 Chine...
Nigerian man allegedly raped to death by his six j...
Dog gives birth to 'cat'
သူကမှတစ်ကယ့် မြွေတွေကိုနိုင်သူအစစ်... မြွေဆရာတွေထ...
"Only in..." Mexico
Professional Cuddler Charges $60 Per Hour of Cuddl...
Men Will Always Be the Same
ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေမယ်.... မြင်ရသူ အသက်ရှူမှားလော...
The Largest Breasts In Europe
Indian boy, 6, suckles milk from stray dog
People Who Live Bizarre Lives
World’s Most Drinking Countries A report from W...
Chinese acrobat survives high-wire fall
Hairdresser uses Zen meditation to cut hair with h...
Young Man Begging for Wife’s Forgiveness Kowtows a...
Varieties of Photosအပန်းဖြေစရာ၊ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ... အဓ...